MANAOVA ASA FIANTRANA
- Ary inona no ataonao eto ry Albert?
- Manao asa fiantrana aho Pastera a! Ianao nilaza fa izay ataon’ny tananao ankavia, aza atao fantatry ny tananao ankavanana, tsy misy mahalala ary tsy misy mahafantatra mihitsy izao asa soa ataoko izao. Manatanteraka izay lazain’ny toriteninao aho!
- Hitanareo rankizy, raha hiampita ny ranomasina mena ny zanak’Isiraely, Mosesy moa olona mahay rano tsara, efa fantany ny toetr’andro, ka ilay fotoana nandrivotra be iny, dia nitsoka mafy ny rivotra avy any andrefana sy atsinanana, dia nisintona ny ranomasina ary tsy nisy afa-tsy eo amin’ny 10 sm eo sisa ny hahavon’ny rano. Dia niampita ny Zanak’Isiraely!
Dia nisy mpianatra iray niantsoatso sady nihorakoraka nanao hoe:
- Fahagagàna, fahagagàna!
- Fa inona lehity ity mahazo an’ialahy a! hoy ny mpampianatra sady tezitra.
- Fahagagàna, rano 10 sm dia nahasempotra ny miaramiala egyptiana rehetra ka nahafaty azy!
MAMANGY AMIN’NY FAHORIANA
Jhon Wesley, ilay Fifohazana malaza anglisy, dia nandeha nitsidika tany Amerika indray andro. Rehefa nandalo teo akaikin’ny sekoly iray izy, handeha hiondrana an-tsambo indrindra no nosakanan’iretyo mpianatra, sady nananihany no toa naneso azy:
- Andriamatoa Wesley, mba fantatrao moa ny vaovao?
- Momba ny inona moa izany, hoy ity mpitory tsy taitra.
- Maty anie Satana e! hoy izy ireo, sady mody hentitra ery.
- Mamangy amin’ny fahoriana ary e! Indrisy tena kamboty ianareo!
ILAY VERY KA HITA INDRAY
Nandritry ny volana vitsivitsy hono no efa nanatavezana ity ondry iray, kinanjo indray hariva, tsy hita ilay ondry. Notadiavina, notdiavina, ka he. Lany haika ny mpianakavy!
Alahelo ny an’ny fianakaviana moa, ary toa nofafàna tao an-tsaina sisa ny fahatsiarovana azy, rehefa el any ela.
Fa indray andro, efa harivariva somambisamby iny, toa ohatry ny misy ondry avy ery andrefana ery.
- Manonofy ve aho sa manahoana e! hoy ilay raim-pianakaviana e?
- Tsy manonofy ianao rainy a! tena ilay ondrintsika ity!
- Hanao fety isika ny amin’ny fiverenany. Sambory ry zalahy de vonoy a! Fa ity ondriko ity efa very fa hita indray, ary rehefa hita sao dia lasa indray, ka dia ataovy amin’ny fanaovana azy!
Tandremo, rehefa mba niverina ilay maditra ! Aza atao toy izany!
MIDIRA AMIN’NY FIFALIAN’NY TOMPONAO
Noana mafy ireto misionera telo lahy tany an’efitra, rehefa avy nitory Filazantsara, tsy nisy afa-tsy atody iray nandrahoana anefa sisa no sakafo teo amin’izy ireo. Nanapa-kevitra ary izy ireo, fa izay mahita andinin-tsoratra Masina tsara indrindra mifanaraka amin’ny zavatra mahazo azy ireo, no hihinana ilay atody.
Dia sady namaofy ny atody hono ilay voalohany no niteny hoe:
- Hano izay arosony eo anoloanareo!
Ilay faharoa kosa hono, sady nanisy sira ilay atody no niteny hoe:
- Ianareo no fanasin’ny tany!
Ilay farany kosa sady nandray ny atody, no nanao azy telimoka, sady nivontirika ny masony, teo am-pitelemana azy, no sady niteny hoe:
- Midira amin’ny fifalian’ny tomponao!
NY RENIN’IALAHY NO HOHANINA
Nianjera hono ity fiaramanidina iray ary maty daholo ny mpandeha rehetra afa-tsy Misionera tanora tsara tarehy iray. Tany anaty ala izay onenan’ny olon-dia izay mpihinana olona anefa no nianjeran’ny fiaramanidina.
Dia mazava ho azy, fa hitan’ny olon-dia izy, lehilahy iray miaraka amin’ny zanany lahy. Dia niteny hono ilay zanany hoe:
- Dada a, tonga dia hohanina ve ity sakafo sa ahoana?
- Aza miadaladala leitsy a! Ny renin’ialahy izao no hohanina androany!
Nampahorian’ny vadiny mafy hono ity vehivavy tanora iray ary farany nitsoaka niala tao amin’ny tokantrano ilay lehilahy. Onena ity zananivavy ny reniy, satria sady tsy niasa, no tsy nanam-bola, no tsy nanana na inona na inona. Diananapa-kevitra hono izy handeha hitady vady ho an’ity zanany. Rehefa ela hono ny ela, nahita roa lahy be izao izy, saingy tsy hitany izay hatao vinanto fa sahirana ny sainy. Dia tapa-kevitra hono izy hitondra azy roa lahy teo amin’i Solomona.
- Tonga aty aminao aho ry mpanjaka, mitondra azy roa lahy ireto, ianao moa olon-kendry, ny zanako efa nijaly loatra, ka tsy fantatro izay mendrika ho vadin’ny zanako amin’izy roa lahy ireto!
Nieritreritra kely hono ny mpanjaka, dia niantso ny mpiambina izy:
- Miaramila! Sambory io vehivavy io dia tapaho roa!
- Aoka re ry mpanjaka a! aza dia vonoina re izy, hoy ilay tovolahy iray teo an-kavanana, sady nitaraina!
- Tanteraho izay baiko azonareo, hoy ilay iray teo amin’ny ankavia!
Dia hoy ny mpanjaka:
- Ity eto amin’ny ankavanana ity no vinantonao Ramatoa. Mahaleova mahalasàna!
90 votes. Moyenne 2.97 sur 5.